Izindlela zokukhumbula amagama zamaJalimane. Amasu wokuthuthukisa inkumbulo namasu wokukhumbula amagama amaningi ngesikhathi esifushane. Kubalulekile ukuba nenkumbulo eqinile hhayi eyesiJalimane kuphela kepha zonke izilimi zakwamanye amazwe. Ngakho-ke, uma unenkinga yokwenza ngekhanda lamagama, qinisa inkumbulo yakho.
Ukubamba ngekhanda amagama, ukufunda izakhiwo zemisho, ukuqonda kalula, ukukhumbula ngezenzo, ukukhumbula ngekhanda amagama, ukubamba ngekhanda ama-articels Kufanele ube nenkumbulo enamandla futhi elula ukukhumbula imisebenzi efanayo.
Sineziphakamiso ezithile zokuthuthukisa inkumbulo yakho:
Rarululani puzzle eziningi. Ukuxazulula amapuzzli kuthuthukisa inkumbulo futhi kukusize ukhumbule kalula.
Zama ukukhumbula amagama abantu osanda kuhlangana nabo. Ngale ndlela, uzofunda ukuthi ungakhohlwa kanjani.
Lapho umsebenzi unzima kuwe, ungalilahli ithemba ngokushesha, uphushele imingcele kuze kube sekugcineni.
Phuma empilweni yakho yansuku zonke eyisidina futhi wenze izinto eziningi ezahlukene njalo, phuma emikhubeni yakho.
Enye yezindlela eziphumelelayo zokuqinisa inkumbulo ngokuguqula imikhuba, zama ukwenza izinto ezilula ohlale uzenza ngesandla sakho sokudla ngolunye usuku ngesandla sangakwesobunxele.
Uma uya esitolo uyothenga, ungalungiseleli uhlu lwezinto ozitholile kusengaphambili. Zama ukubakhumbula bonke emakethe.
Ukufunda izilimi zakwamanye amazwe nakho kuyindlela ephumelela kakhulu yokuthuthukisa inkumbulo.
Uzohlala uqeqesha inkumbulo yakho ngokufunda amagama amasha nolwazi olusha nsuku zonke. Lapho inkumbulo yakho isebenza kanzima, iyoqina ngokwengeziwe.
Ividiyo lapha ikutshela indlela yokukhumbula ngekhanda amagama kalula, noma ngabe imemori yakho ayinamandla kakhulu.
Siyethemba ukuthi ividiyo yethu izoba wusizo nakwabafundi bezilimi zaseJalimane nezinye izilimi zakwamanye amazwe.
Njengeqembu le-www.almancax.com, sikufisela impumelelo.